Jaw Crushers - Tanzania Crusher
Tanzania Crusher>>stone crusher machine>> Jaw Crusher
Jaw Crusher, Shanghai XSM dia fitaovam-pitrandrahana varotra matihanina, Jaw Crusher, fitaovana fiarovana mahaleotena, orinasa mpamokatra varotra fanafody. Ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, ny voalohany bande conveyor, vibrating feeder, fitaovana fandefasana entona handefa ny jaw crusher, impact crusher, hydraulic crusher dia harona matevina matevina, ary faharoa amin'ny a jawcrusher kely, hammer crusher Fitrandrahana harena ankibon'ny tany faharoa tadin efijery Ny fihaonana amin'ny mari-pamantarana maromaro amin'ny ore dia entina mankany amin'ny baolina baolina, ultrafine mill ert magnetic separators, flotationmineral machine dia mifidy karazam-pahalalana maro samihafa. Mazava ho azy, fa fanodinana fitrandrahana harena ankibon'ny tany fotsiny ity, Shanghai XSM mifototra amin'ny karazan-kira misy anao fitaovam-pako izay mifanandrify tsara anao, raha manana fanontaniana ianao, dia miangavy anay hifandray aminay na tsindrio ny tsara eo amin'ny sehatry ny famolavolana, ny mpiasa ara-teknika dia manome anao valiny amin'ny antsipiriany.
Xuanshijaw crushersdia ampiasaina voalohany amin'ny fampihenana ny karazana vato sy ny fitaovam-pako ao anaty vatam-bary. Ny fitaovana hotorotoroina dia mety henjana, mineraly sy mineraly malefaka izay ny hery manempotra dia tokony ho mihoatra noho ny 320 MPa. Ny mpitrandraka ny valanoranay dia manatsara ny endriky ny V-endriny, ka miteraka fihenam-bidy kokoa. Amin'izao fotoana izao, ireo vokatra ireo no nanjary fitaovana fanodinana voalohany indrindra amin'ny famokarana vato. Ampiasain'ny ankamaroan'ny indostria izy ireny, toy ny fitrandrahana, metallurgy, fananganana fitaovana, lamasinina, fiarovana ny rano, akora simika ary ny sisa.
1. Hafa kokoa ny fihenan'ny fihenam-bidy, fampitomboana ny vokatra, ny haben'ny vokatra vita, ny habetsahan'ny fampiharana.
2. Ny rafitra tsotra, ny fahombiazany, ny fikojakojana tsara.
3. Ny seranan-tsambo sy ny seranan-tseranana dia manitsy, mora ny manara-maso ny vokatra.
4. Ny fahombiazan'ny angovo, ny vidim-pamokarana, ny fiainana an-davan'andro, ny tontolo iainana.
Ny vata-tsipika madinidinika dia mihodina eo ambanin'ny hetsika fiara fitaterana, ka mahatonga ny valifaty hivoatra miakatra. Ny fitaovana dia tapaka kely ho an'ny vokatry ny fifandonana, mipoitra ary mihosotra. Aorian'izany, ny fitaovana dia entina avy any amin'ny seranan-tsambo.
Technique Specifications de Jaw Crusher
Famoahana ny fanokafana
(T / h) Electric power
(KW) Endriny ivelany
Fanamarihana: Io famaritana io dia famaritana fotsiny, ny fanovana rehetra dia mety amin'nyJaw Crushervokatra.